I-China kunye ne-Dominica ngoku bavula ukuhamba phakathi kweZizwe zabo ezimbini
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-China kunye ne-Dominica ngoku bavula ukuhamba phakathi kweZizwe zabo ezimbini
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zeDominica Breaking • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukutyikitywa kweSivumelwano phakathi kweTshayina neDominica
I-Dominica kunye ne-China baye banandipha ubudlelwane obude ukususela ekusekeni ubudlelwane bezozakuzo ngo-2004. Namhlanje, amazwe amabini atyikitye isivumelwano sokuhamba ngaphandle kwe-visa phakathi kwamazwe abo. Abemi bamazwe omabini ngoku banokuhamba babuye bebuya ngaphandle kokufuna i-visa yangaphambi kokuhamba.
Ubudlelwane phakathi kwala mazwe mabini bubandakanye ngokuphawulekayo utyalo-mali lwaseChina kwicandelo lezempilo laseDominica ngokusungulwa kweSibhedlele soBungane saseDominica-China, esele siguqule iziseko zokunakekelwa kwezempilo kwesi siqithi. Isibhedlele kuphela esinikezela ngeenkonzo ze-MRI kummandla we-Eastern Caribbean, impumelelo eyenziwe ngobudlelwane obuqinileyo phakathi kwamazwe amabini.
Unyaka ophelileyo ubonile isiqithi esincinci saseDominica ukwandisa ukufikelela kwayo kumazwe ngamazwe. Isivumelwano sokukhululwa kwii-visa siza kwenza abantu baseDominican bafikelele kwelinye lamazwe aphambili kwezoqoqosho, ukuqinisa amathuba okuhamba kushishino kunye nokuzonwabisa. Abemi baseDominican ngoku banokuhamba i-visa-free okanye i-visa-ekufikeni ukuya kumazwe angaphezu kwe-160, ibalelwa ngaphezulu kwe-75% yeendawo zehlabathi eziya kwenza ukuqhuba ushishino kumazwe ahlukeneyo kube lula ngokungenasiphelo.
Ngokuthelekisa, ipasipoti yaseTshayina ivumela kuphela ukufikelela simahla kwe-visa kumazwe angama-79 kunye nemimandla. Ukunikezelwa kwayo okulinganiselweyo kwenza kube ngumqobo kubemi bayo ukuba bafikelele kwii-hubs zehlabathi ezifana ne-United Kingdom okanye i-United States. Oku kuthetha ukuba abemi baseTshayina kufuneka badlule kubunzima bokufumana ii-visa, bachithe ixesha elixabisekileyo, imali kunye nezixhobo.
Kunokuthethwa okufanayo kwabo banethemba lokushishina eChina. Umzekelo, oosomashishini kunye nabatyali-zimali abavela kumazwe afana ne-Indiya, uMzantsi Afrika, iNigeria, okanye i-Singapore kufuneka batsibe kwiihupu ezifanayo, njengoko bengenaso isivumelwano sokungena kwi-visa ne-China. Oku kufuna ukugcwaliswa kwamaphepha amade anokukhokelela kumathuba alahlekileyo anefuthe elibi kushishino.
“I-China ayikuvumeli ngokwenene [ufikelelo] lwe-visa-free kubantu abaninzi abaphethe iipaspoti, kwaye banike elo lungelo kwipaspoti yaseDominican yazo zonke iindidi. Ke, yeyona nto ibalulekileyo, ”utshilo iNkulumbuso uRoosevelt Skerrit. "[Abemi baseDominican] baya kukwazi ukuhamba kwiindawo ezininzi zamashishini kwihlabathi liphela," wongeze watsho.
Unikezelo lwe-visa olwandisiweyo lwaseDominica sesinye sezizathu zokuba esi siqithi sibe yindawo enomtsalane kubatyali-mali abafuna inkululeko enkulu yokuhamba. Inkqubo yobuMmi ngoTyalo-mali yaseDominica (CBI) ibe yindlela ethandwayo yokuphumeza oku. Le nkqubo yasekwa ngo-1993, ixhobisa abatyali-zimali behlabathi ngokubanika ubumi besibini kunye nazo zonke izibonelelo ezinxulumene noko xa igalelo lenziwe kwingxowa-mali karhulumente wesizwe okanye kwizindlu nomhlaba. Njengenkqubo eyaziwayo kumazwe ngamazwe, iDominica iqinisekisa ukuba abo bathi babe ngabemi baphumelele inkqubo yenkuthalo enemigangatho emininzi ukukhusela isidima sayo.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, inkqubo yeDominica yamkele amanqaku abatyali-zimali baseTshayina abanomdla wokufumana ubumi besibini njengendlela yokukhusela ubutyebi babo, usapho kunye nekamva labo. Ngaphandle kwamathuba okuhamba, ubumi baseDominica bunceda iintsapho ukuba zifikelele kumaziko emfundo aphezulu ehlabathi, zichonge amathuba oshishino angenye kunye namathuba emali kwilizwe elinobudlelwane namanye amagunya amakhulu afana ne-United Kingdom ne-United States.